FIQI: Wiilasha afar degmo ayaa dib ula wareegay awoodda xafiiska Raiisel Wasaaraha - Axadle – Axadle
FIQI: Wiilasha afar degmo ayaa dib ula wareegay awoodda xafiiska Raiisel Wasaaraha – Axadle
By Abdiwahab Ahmed	 On May 1, 2021
Muqdisho (Axadle) – Xildhibaan Axmed Macallin Fiqi ayaa ka falceliyey go’aankii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee uu ku wareejiyey gacan ku haynta doorashooyinka dalka iyo amniga, ka dib fadhigii baarlamaanka.
Fiqi ayaa bartiisa Facebook ku qoray in ciidamada afarta degmo ee Kaaraan, Yaaqshiid, Hodan iyo Hawlwadaag ay mas’uul ka ahaayeen ka bixitaanka heshiiskii Sebtember 17, sida uu hadalka u dhigay.
Oday Farmaajo oo bil ka hor fadhiyay teendhada Afisyooni ayaa ogolaaday qodobada heshiiska maanta kadib markii uu cadeeyay in dalka aan xoog lagu qabsan karin.
Shirka Dhuusamareeb 4 wuxuu ahaa mid waafaqsan wixii uu diiday laba toddobaad ka dib magaalada Baydhabo taas beddelkeedana wuxuu doorbiday inuu dhagaysto wixii aan dhicin ka dibna si fudud u diido oo loogu daro liiska tanaasulka.
Waxaan u maleynayaa in wiilasha xaafadaha Kaaraan, Yaaqshid, Hodan iyo Hawlwadaag ay mar horeba u codeeyeen soo celinta heshiiskii Sebtember 17, wixii aan maanta ku aragnay Baarlamaankuna uu ahaa soo celinta dharka.
Khudbadda Farmaajo waxaa loo arki karaa oo keliya xil wareejintii mas’uuliyadda doorashooyinka iyo amniga oo loo wareejiyay ra’iisul wasaare Rooble.
Waxaan rajeynayaa Md. Rooble shaqadiisa wuxuu u gutaa si eex la’aan iyo daah furnaan wuxuuna dalka u horseedaa doorasho xor iyo xalaal ah. Farmaajo wuxuu si siman ula dhaqmaa musharixiinta iyo musharixiinta kale.
Xafiisyadii Rooble waxaa dib u soo celiyey afarta degmo iyo Ururka Musharaxiinta!
Oday Farmaajo waxaan urajeynayaa nasasho wanaagsan.
Xiddigii Garoonka, Rikoodhadii Ciyaarta Iyo Xaqiiqooyinka Kulankii
The One Meals to Eat Proper Now to Instantly Be More healthy